HTC Ocean Harmony - အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ | Androidsis
El HTC အသက်ရှင်နေသည့်နှစ်ကိုတစ်စုံတစ်ခုသောအရာများနှင့်ပြည့်စုံသည်ဟုဖော်ပြနိုင်သည်။ တယ်လီဖုန်းဌာနမှထုတ်လုပ်သောဆုံးရှုံးမှုများကြောင့်ကုမ္ပဏီတွင်ပြproblemsနာများစွာရှိသည်။ လအနည်းငယ်အကြာတွင်ပြီးနောက် ဂူဂဲလ်ဝယ်ယူမှု ဒီဌာနခွဲကနေအရာတွေအများကြီးပိုကောင်းသွားပုံရသည်။ ကုမ္ပဏီသည်ထိုကဲ့သို့သောမော်ဒယ်သစ်များပေါ်တွင်ဆက်လက်လုပ်ကိုင်နေသည် HTC Ocean Harmony.
လွန်ခဲ့သောနှစ်လခန့်ကဤကိရိယာကိုကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ကသတ်မှတ်ခဲ့သည်။ သူကမကြာခင်မှာပဲဒီနာမည်နဲ့ဖုန်းတစ်လုံးထုတ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ ငါတို့သိပြီးသားဖြစ်သောကြောင့်သူ၏ဟောကိန်းများပြည့်စုံခဲ့သည် ဤ HTC Ocean Harmony ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ. ဤကိရိယာမှကျွန်ုပ်တို့အဘယ်အရာမျှော်လင့်နိုင်သနည်း။
မကြာသေးမီအချိန်အထိသတင်းအရင်းအမြစ်များစွာကဤကိရိယာသည်အသစ်စက်စက်တစ်လုံးဖြစ်လာလိမ့်မည်ဟုယူဆခဲ့ကြသည် U11 ဘဝ သို့မဟုတ် U11 Plus အား။ အဆုံး၌ထိုသို့သောမဖြစ်ခဲ့သော်လည်း ငါတို့နှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည် ကုန်ပစ္စည်းအသစ် နှင့်သမုဒ္ဒရာအကွာအဝေးပိုင်။ အခြားမော်ဒယ်နှစ်မျိုးကိုလည်းရောက်ရှိမည်ဟုမျှော်လင့်ရသောပမာဏ သမုဒ္ဒရာမာစတာနှင့်သမုဒ္ဒရာဘဝ။ ဒါပေမယ့်ဘာမှမသိသေးပါဘူး
ကျွန်တော်ဒီကိုအာရုံစူးစိုက်လျှင် HTC Ocean Harmonyကျနော်တို့တစ် ဦး နှင့်ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည် ၅.၉၉ လက်မ LCD မျက်နှာပြင်။ အဲဒါရှိလိမ့်မယ် 2.160 x 1.080 pixel resolution နှင့်မျက်နှာပြင်အချိုး 18: 9။ ဒီတော့ထိုင်ဝမ်ကုမ္ပဏီကဒီစက်ကိရိယာနဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုချိတ်လိုက်တယ်။
အတွင်းပိုင်း Snapdragon 652 ပရိုဆက်ဆာ,4GB RAM နှင့်စုစုပေါင်းသိုလှောင်မှု 64 GB ကို။ ဖုန်း၏ဗားရှင်းအသစ်များထွက်ပေါ်မလာကိုမူမသိရသေးပါ။ သိုမဟုတ်သိုမဟုတ်သိုလှောင်မှုကိုတိုးချဲ့ရန်ဖြစ်နိုင်ပါလိမ့်မည် microSD ကဒ်။ HTC နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ခုခုပြောရန်ကျွန်ုပ်တို့စောင့်နေရမည်။
ဘက်ထရီနှင့် ပတ်သက်၍ မူ၎င်းကိရိယာသည်လုံလောက်သည်ထက်ပိုပေးမည်ဟုထင်ရသည်။ The HTC Ocean Harmony တွင် ၃,၉၃၀ mAh ဘက်ထရီရှိသည်။ ၎င်းသည်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးကောင်းမွန်ပြီးတစ်နေ့လုံးအတွက်လုံလောက်သည်။ ယခုအချိန်တွင်၎င်းကိုလူသိများသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုသိရှိရန်လိုအပ်သည် ကင်မရာများအကြောင်းအသေးစိတ်ကို ဖုန်းမှ
ဒီကိရိယာ 2018 ခုနှစ်တွင်စျေးကွက် hit လိမ့်မယ်။ ဖြစ်နိုင်သည်ယခုနှစ်အစမှာတိကျသောရက်စွဲကိုမထုတ်ဖော်ရသေးပေ။ ကျနော်တို့ရဲ့စျေးနှုန်းကိုလည်းမသိပါဘူး၎င်းသည်များသောအားဖြင့် HTC အတွက်ပြproblemနာအရှိဆုံးရှုထောင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီပစ္စည်းအသစ်ကိုမင်းဘယ်လိုထင်သလဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » HTC Ocean Harmony ၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ
[APK] Files GO, Google ၏ဖိုင်မန်နေဂျာနှင့်သန့်ရှင်းရေးကို download လုပ်ပါ